Sonke siyazi ukuba ukuze uhlale usemncinci, kufuneka udle ngokufanelekileyo: udle izithelo, imifuno, imifuno, ivenkile zaselwandle. Kodwa ukongeza kokutya okunempilo akuyi kuphazamiseka kunye nezongezo zokutya.
ERashiya, abantu baphatha ama-BAD ngokulumkisa kwaye abanakuyithemba kakhulu loo mveliso. Kodwa eNtshonalanga, yonke into ihluke: izongezelo zondlo zisetyenziswe kaninzi kunamayeza. Kodwa ukuze ufumane inzuzo enkulu kubo, kubalulekile ukufumana izongezelelo zinyani, ezongezelelweyo. Namhlanje kwimarike eyona nto ibaluleke kakhulu yiJamani, yaseMelika kunye ne-Swiss BAD.
Coenzyme: unjiniyela wezandla
I-Coenzyme ayinakuphiliswa kwimizimba yethu. Uzalisa imikhosi eguqukayo ukusuka ekutya ukuya emandleni. Ukongezelela, inezixhobo zokulwa ne-antioxidant: ikhusela iiseli zethu kumonakalo kwaye inceda ekutshintshisweni kwezinto. Ngako oko, le nkunkuma ihlala iqukwa kwindlela yokwakhiwa kwemali yokulahleka kwesisindo. Siyabulela ku-coenzyme, iiseli zethu zihamba ngokukhawuleza, kwaye ulusu lubukeka lulutsha.
Kuphi ukufumana i-coesim? Ukutya akukwazi ukudibana. Iveliswa sisibindi kwi-coenzymes ehambelana nayo, equlethwe kwiiprotheni zezilwanyana: Inhliziyo yenkomo, inyama, isibindi kunye nemifuno eluhlaza. Kodwa kukho amaxesha apho ukutya okunamandla kwiprotheni kunqatshelwe. Ngoko ke kungcono ukufumana le nto kwifom ehlanganisiweyo. Ingathengwa njengesongezo sokutya esizimeleyo. Thatha i-coenzyme 1 capsule kabini ngosuku ngelixesha lokudla.
Ngaphantsi kwesi siqulatho sisifo se-hormone-dehydroepiandrosterone. Le nkunkuma iveliswa ngama-ovari kwaye yiprogenist yazo zonke i-hormone: iqhutyelwa ku-progesterone, i-estrogen, i-cortisol kunye ne-testosterone. Xa ibhalansi yethu ye-hormonal iyavumelana, umzimba wethu ubonakala ubuhle. Iingcaphephe ezenziwa e-US ziye zabonisa ukuba i-DHEA inokulondoloza ixesha lobomi bethu, ngelixa lisenza sibe namandla kunye nolutsha, kwaye sisindise kwisisindo esingaphezulu. Xa uneminyaka yobudala, inani lempahla liyancitshiswa emzimbeni wethu. Xa uneminyaka engama-40, isiqingatha kakhulu, kwaye ngo-60 ayisaphantsi.
Ndingafumanaphi i-DHEA? Iveliswa ngumzimba wethu we-Squalene. Le nkunkuma ifumaneka kwi-avocados, iminqumo, ishizi, isitshalo seqanda, ityhuna. Kuyiluncedo kakhulu ukusebenzisa yonke le mveliso kwipaladi, inqabile ngeoli ye-mint. Kwii-pharmacy i-DHEA ayithengiswanga ngokwahlukileyo. Inokufunyanwa kuphela ekubunjweni kweengxaki zokulwa nokuguga. I-DHEA ithathwa kanye ngosuku ngosuku lwethebhulethi enye ngenyanga.
I-Dong Kwai: I-Lady of the Year
Esi sityalo sinceda ukulawula umjikelezo wesini. Kwaye ngexesha lokuphuka komzimba kunciphisa ukoma komlanjana, ukuxubha kunye neepilpitations. I-DongKwai inotyebile kwi-vitamin E, isinyithi kwaye inempahla ene-antioxidant. Inceda ukukhusela enye yezona zinto eziphambili zokuguga - i-oxidation ye lipids, inceda ukugcina umswakama kwaye uyikhusele ekukhanyeni kwelanga.
Ndiyifumana phi na? Ukuhlaziywa kwezakhiwo. Thatha enye ipilisi enye ngosuku ngosuku.
UGingko Biloba: ivuselela
Esi sityalo sinjenge-plum. Kubhekwa njengona nto ibhetele engqondweni. Kwi-cosmetology, i-ginkgo biloba isetyenziselwa ukuchaphazela ipompo: i-cocktail ekhethiweyo yezinto eziphilayo ziqinisa iindonga zeenqwelo ze-capillary, kuphucula ukuchithwa kwegazi kunye neeseli zenziwe ngezinto ezincedo. Ngenxa yoko, sibonakala siselula.
Kuphi ukujonga? Kwiimimiselo zeengxaki ezahlukeneyo, kunye nokuxhaswa ngokwaneleyo kokutya. Isetyenziswe ezimbini kwiinyanga ezimbini kwi-tablet enye.
Ginseng: umthombo wokuvuya
I-Ginseng iyaziwa ngeendawo zayo zokuvuselela. Izityebi kuma-antioxidants, amafutha anamafutha kunye nama-essential, isitashi, ishukela, iivithamini kunye ne-microcircuits, ezinokwakha i-tonic kunye nezikhuthazo.
Kuphi ukujonga? Iveliswa njengongeziweyo ngokuzimela ngokwendalo. Kuthatha ii-capsules ezimbini ngosuku ngeenyanga ezimbini.
I-Glutamic acid: i-flavor enhancer
Le nino-aminodi inika amandla amathambo namathambo, ikhusela ukuguga, kwaye inceda ulusu lugcina umswakama. Kwakhona kunakho ukukhuthaza umsebenzi wengqondo, ukunciphisa umonakalo otywala utywala kunye ne-nicotine, iziyobisi kunye nezidakamizwa.
Kuphi ukujonga? Njengenxalenye yesondlo esisondlo okanye njengesongezo. Thatha i-1 teaspoonful once ngosuku, uchithe amanzi e-vst.
I-Glutathione: i-wrestler ngokuguga
I-Glutathione ithathwa njenge-antioxidant enamandla, ehlanganiswa yimizimba yamanye ama-acids amathathu. Lo ngumkhiqizo ochasayo kakhulu olwavuthayo olwa nokuguga. Emva koko, ukuguga okubangela ukuphendula okuvuthayo kwiiseli zomzimba wethu.
Kuphi ukujonga? Le nkunkuma ifumaneka kumavolonti, izaqathi eziluhlaza, izithelo ze-citrus. Kwi-pharmacy ithengiswa ngokudibanisa kunye ne-extract yaseBrussels. Thatha i-capsule enye kathathu ngosuku ngeenyanga ezimbini.
Selenium: Ababulali bamaCrabs
Iyakwazi ukunqanda umsebenzi we-radicals yamahhala, unceda ukujamelana neentsholongwane kunye neebhaktheriya, ukukhuthaza ukuveliswa kweseli kunye nokuvimbela ukubunjwa kwegazi kunye nokunyuka kwegazi.
Kuphi ukujonga? Kwiimfuno ezixakekayo eziqukethe i-vitamin E kunye ne-glutathione. Thatha i-tablet enye kabini ngosuku kunye nokutya.
I-Melatonin i-hormone eveliswa ngumzimba wethu. Itholakala kwingqondo yengqondo ye-pineal kwaye isinceda sibonakale size sizive siselula. I-Melatonin yipilisi yokulala yendalo, kwaye ukulala kuyisiqinisekiso sempilo nobuhle. Xa uneminyaka yobudala, le hormone ikhiqizwa ngexabiso elincinci, kwaye ukwamkelwa kwayo kunokwandisa ubomi bethu ngo-20%.
Kuphi ukujonga? Imveliso ye-melatonin ikhuthazwa ngamanqatha, ushizi, iifom, iifama, ubisi. Ungayithenga nangendlela yokuxhaswa kwezinto eziphilayo ezizimeleyo. Thatha isiqingatha seyure ngaphambi kokulala kwithebhulethi enye ngenyanga.
Itiye elihlaza: ikhuselo lezempilo
I-antioxidant enamandla. Iyanciphisa i-carcinogen effect yomsi wecuba, ukukhutshwa kwezinto ezityhefu zothutho kunye namashishini. I-Atanines, equlethwe itiye, ukuqinisa imilambo yegazi, ukususa imbonakalo nokuphucula ukubonakala kwesikhumba.
Kuphi ukujonga? Ithengiswa kuyo nayiphi na isitolo ngendlela yeeyi, kunye nakwimo yokuzimela ngokuzimeleyo. Unako ukusela itiye eluhlaza ngamanye amaxesha ngosuku. UVabletkah uncetyiswa kanye ngosuku ngeenyanga ezimbini.
Ngaba ndifuna ukuthatha izongezelelo zezinto eziphilayo? Kuye kuwe. Kodwa kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba umntu wanamhlanje akanalo ivithamini ezaneleyo kunye namavithamini. Asikwazi ukufumana isixa esilungileyo ekudleni, ukutya okuninzi kusetshenzwa kwaye akupheki kakuhle.
Nangona ungathembeli iziyobisi zee-pharmacy, oku akucaphukisi ngezongezo eziphilayo. Abaninzi babo, njengokuba wena uphendule kwi-athikili, unempahla ebalulekileyo yomzimba wethu. Siyabonga ngabo, sinokuyandisa ixesha lwethu ulutsha, luqinisa impilo yethu kwaye lukhangele konke okufanayo. Ngaba asilokho elowo lethu eliphuphayo? Ngoko ke, ukuba ungumxhasi weBAD, sincoma ukuba uphinde ucinge ngeembono zakho kwezinye zazo.
Unyango lwezilwanyana zamathambo ezinamazinyo
Izityalo zemithi kunye nezindlela zokusetyenziswa kwazo kubantu
Iimpawu zonyango zengqolowa yengca kunye nezilwanyana ezivela kuyo
Utamatisi ogqitywe ngeeshizi zebhokhwe
I-Roll ye-pastry kunye ne-coconut chips
Iphupha elihle liba yinyani
Siyakuvuyisana ngoMhla wootitshala kunye nabo bonke abantwana abasesikolweni ngo-2017
Isobho kunye negalikhi ebhaka, utamatisi kunye noshizi